ikhaya » imisebenzi » I-R & D / Engineer Engineer
Uvulo lweJob: I-R & D / i-Engineer Engineer
indawo: I-R & D / Engineer Engineer
inkampani: Whirlwind FX
Indawo: Burlingame CA US
Injineli yoMyili I-Whirlwind FX-Burlingame, CA
Indawo: Burlingame, CA
Kufuneka ugunyazwe ukusebenza eMelika
I-Whirlwind FX yimbewu exhaswa ngemali, i-hardware iqalise ukutshintsha indlela abathengi abasebenzisana ngayo kunye namava abezindaba. Kukho imfuno ekhulayo kwimakethe yokuzonwabisa ekuzicwangciseni ukuphucula ukucwiliswa nokuququzelela ukusebenzisana kwabantu kunye nemida. Sakha iVortx, isimulator yokuqala sokusingqongileyo kuyo yonke imidlalo yePC kunye nevidiyo. I-Vortx ilawula ukuthutha komoya kunye nokushisa okubangelwa yi-injini ye-software. Khawucinge ucinge ividiyo ye-youtube kwisiphequluli sakho kwaye xa ubona umlilo, uziva ushushu. Oku kuhamba nayo nayiphi na umdlalo we-PC, ngoko xa unyibilikisayo iintshaba zakho nge-flame caster e-Battlefield 1, uziva ufudumele kwi-Vortx.
Njengonjineli yonxibelelwano kwiWhirlwind FX, uya kuphuhlisa izakhiwo, iinkqubo kunye nezisombululo kwi-hardware yesiqhamo esilandelayo. Uya kuthatha uhlolisiso kunye nokucocwa ngeengcamango ezahlukeneyo zokucwangcisa umbane ngokuzandla, ukulandelelanisa okubhaliweyo. Uya kucoca iiplani ezikhethiweyo kwaye ulungelelanise neengcali zenkcubeko ngexesha lomveliso. Sifuna umntu onesimo sengqondo esiphucukileyo esinokusebenzisa isakhono sobunjineli bezobunjineli ukuxazulula iingxaki kwiindlela zokudala, ezinengqiqo. Umgqatswa wethu ofanelekileyo unemvelaphi eqinile, ubunzima bokubamba iqela, ubunono be-3D CAD, namava ekuveleni nasekuveliseni iimveliso zeteknoloji zabathengi. Kufuneka usebenze, ube nesimo sengqondo sokuhamba, kwaye unomnqweno wokufunda. Uya kuba nethuba lokwakha ikamva lokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa.
Uyilo lwezakhono, uphuhliso kunye nemveliso yeemveliso ezintsha zehardware.
Imisebenzi yobunjineli kuyo yonke imveliso yokuphila, ukusuka kwenkcazo kunye nokudala, ngokuyila, ukuveliswa, kunye nokuphucula okulandelayo-gen.
Ukuphumeza iinkqubo zobunjineli zobunjineli kunye neendlela ezichanekileyo, ngelixa uxazulula iindidi ezahlukeneyo kunye nemingeni yokuvelisa.
Nika isandla ekudaleni iinkcukacha zobugcisa kunye nencazelo yemveliso.
Iinjongo zeInjini kunye neendlela ezigcina umnqophiso wokwenza kwaye zisebenza ngokwezinto ezicacileyo.
Ukwakha nokugqiba iimodeli ezinamandla ezikhutshweyo ze-CAD zeengcamango ezikhethiweyo.
Ukuvavanya nokuvavanya amacandelo okuyila ukukhiqiza nokuthembeka.
Ukulungelelanisa neengcali zokuvelisa ukulungiselela ukwenziwa komsebenzi kunye neenkqubo zokuvelisa.
Ukuxhasa imveliso yemveliso kwindlela yokuvelisa.
BS okanye ngaphezulu kwi-Mechanical Engineering okanye namava afanayo kunye ne-2-4 iminyaka yamava asebenzayo anxulumene nawo, okanye inhlanganisela efanayo nemfundo kunye namava omsebenzi.
Unolwazi ngobunjineli kwicala lomatshini weemveliso zabathengi, ngokufanelekileyo kwi-electronic space space.
Ingcali kwi-3D imodeli (i-SolidWorks iyimfuneko).
Ukuvavanya nokuhlalutya (izakhono zokulinganisa zibandakanya).
Ulwazi olunzulu lwamava kunye namava, ngokukodwa nge-plastic injection molding.
KwiNdibano kunye nokuyila.
Izakhono zesiLatin kunye / okanye zaseCantonese kunye kunye.
I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Injini yeVidiyo ndiphila	2017-09-13
Previous: IZINDAWO ZENKQUBO ZEMFUTO E-NETHERLANDS IXHUMA IZIXHOBO ZOKUPHILA NGEMVELO
next: Gcina Ulawulo Lokugcina Kwakho
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "I-R & D / Engineer Engineer". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/mechanical-rd-manufacturing-engineer/. Enkosi.